IXiaomi Mi 9 izakufika ngesona senzi somnwe esikhawulezayo kwiminwe yonke | | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UXiaomi ukulungele ukumilisela i-flagship ye-smartphone yakhe Siyi9kwi kwiintsuku ezizayo, Kwaye, phambi kokuba inkampani inikezele ngokusesikweni ngesixhobo, uXiaomi kunye nabaphathi bakhe bebesoloko beqinisekisa iimpawu zefowuni.
Kwintshukumo yamva nje, uMongameli weXiaomi uLin Bin utyhile ukuba Siyi9 iza kuza ne-in-display sensor yeminwe eya kuba yeyona ikhawulezayo ikhoyo nakweyiphi na i-smartphone. Ngapha koko, wongeze loo nto inkampani ikhethe isizukulwana sesihlanu sokubonisa kwiminwe yokubonisa iminwe.
U-Lin Bin uthethile iyakuba ngama-25 eepesenti ngokukhawuleza kunakwisenzi sokubonisa iminwe yangoku ezinikezelwa kwezinye izixhobo. Ngapha koko, ikwabonakalise ukuba yenzelwe iimeko ezizodwa zokusetyenziswa ezinje ngeminwe eyomileyo kunye neqondo lobushushu eliphantsi, eliza kuthi landise inqanaba lokuvula ngokuthelekiswa nesisombululo sesizukulwana sangaphambili. (Fumanisa: I-Xiaomi Mi 9 Edition Edition yeyona fowuni inamandla emhlabeni)
Kwakhona iza nemodi yasebusuku, apho ukuqaqamba kwendawo yokuqondwa kweminwe kulungiswa ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwindalo. Ukongeza koku, inkampani yaseTshayina ikhethe ukwandisa indawo yokuvula ngokuthelekiswa nesizukulwana esidlulileyo kwaye indawo yokubekwa itshintshiwe.
Kutshanje, u-Lei Jun, umsunguli kunye ne-CEO yeXiaomi, utyhile ukuba ukusebenza okuphezulu kwe-smartphone kuya kuba ne-40 yeepesenti encinci xa kuthelekiswa neyandulelayo. Iscreen senotshi ye-smartphone iya kubonelela ngomyinge wesikrini nomzimba we-90,7%.
Ngokwento elindelweyo, i- Xiaomi Mi 9 izakufika nge I-6.4 intshi ye-AMOLED i-FullHD + isiboniso ebonelelwa yiSamsung. Ikwanombala obalaseleyo we-NTSC obalaseleyo we-103.8% ukuya kuthi ga kwi-600 nits yokuqaqamba. Kukwakhona itoni yolungiselelo lweemeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa, ezinje ngemowudi yasebusuku kunye nemowudi yomdlalo. Ukongeza, inesizukulwane sesibini "selangeni" esinombala ongcono kunye nokuzala okuqaqambileyo phantsi kokukhanya okuqinileyo.
Iingxelo zibonisa ukuba Isikrini seMi 9 sikhuselwe yi Iglasi yeCorning Gorilla 6 yeglasi kwaye iza nesiqinisekiso sokukhusela iliso kwiZiko laseJamani leeNjineli zoMbane. Iya kubandakanya Inkqubo yeQualcomm Snapdragon 855, iikhamera zangasemva kathathu kunye nebhetri yamandla ye-3,500 mAh ene-27 watt yenkxaso ekhawulezayo yokutshaja.
Kucingelwa ukuba umahluko osisiseko seXiaomi Mi 9 ubiza malunga ne-3.000 yuan (390 euros approx.), ngelixa okwahlukileyo okuphezulu kungaphaya kwamanqaku angama-4.000 ee-yuan (520 euros approx.). Ukwazi ngokuqinisekileyo yonke into ngayo, kuya kufuneka silinde ukumiliselwa ngokusesikweni kwiveki ezayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Mi 9 izakufika ngokukhawuleza kwe-screen fingerprint sensor
Unganyanzela njani ukuba umise usetyenziso kwi-Android